Khadija Ismayilova oo heshey abaalmarinta Livelihood-pris - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Khadija Ismayilova oo ah wariye u dhalatey Azerbajdzjan . Foto: Right Livelihood/TT
Khadija Ismayilova oo heshey abaalmarinta Livelihood-pris
Khadiija Ismayilova oon lagu abaalmariyey biladda Livelihood-priset.
La daabacay tisdag 26 september 2017 kl 11.04
Abaalmarinta Right Livelihood-priset ayaa ayaa waxaa sanadkaan la siiyey wariye Khadija Ismayilova oo u dhalatey dalka Azerbadjan iyo saddex qof oo kale oo abaalmarintaas la wadaagey.
Abaalmarintan oo loogu yeero in ay tahay mid u dhiganta tan Nobelpris-ka, ayaa sanad walba la guddoonsiiyaa dadkii loo garto in ay halgan muuqda u soo galeen dhanka caddaalada.
Ole von Uexkull waa madaxa hey’adda Right Livelihood:
- Khadiija Ismaylova waa mid ka mid ah dadka dunida ugu geesisan, waana wariye ka hawlgasha dalka Azerbajan oo ah dal labarka 162 ka galey liiska xuriyadda saxaafadda dalalka dunida lagu qiimeeyo. Waxaa marar badan loo xirey baaritaano saxaafadeed oo ay soo bandhigtey, waxayna aad ugu hawlgashey la dagaalanka musuqmaasuqa ka jira dalkeeda Azerbadjan , ayuu yiri Ole von Uexkull.
Khadiija Ismaylova ayaa dhanka kale baaritaankeeda saxaafadeed wuxuu dawr weyn oo lixaad leh ka qaadatey kashifaaddii la kashifey laaluush ay shirkadda Telia Sonera oo dalkaan Sweden laga leeyahay ay ku bixisey dalkeeda Azerbadjan.
Abaalmarintan ayaa sidoo kale waxaa lagu maamusey Robert Bilott oo ah Qareen u dhashey dalka Mareykanka kaas halgan weyn u galey arrimaha daryeelka deegaanka.
Waxaa iyana abaalmarintaas loo gartey Yetnerbersh Niguisse oo u dhalatey dalka Itoobiya taas oo halgan dheer u gashey dhowridda xuquuqda haweenka iyo gabdhaha dalkeeda.
Sidoo kale waxaa abaalmarintaas la siiyey Colin Gonsalves oo halgan dheer u galey difaacidda xuquuqda dadyowga ku dacdareysan dalka India.
Dadka abaalmarintan ku guuleystey ayaa 1-da bisha december waxaa lagu guddoonsiin doonaa xaflad ka dhici doonta magaalada Stockholm.
Abaalmarintaan sanadlaha ah ee Right Livelihoodpriset ayaa waxaa sanadkii 1980-kii aasaasey Jakob Von Uexkull oo ahaa jarmal asalkiisu Iswiidhish yahay, wuxuu iibshey shirkad uu iska lahaa oo uu lacagtii ka soo baxdey u gaar yeeley abaalmarintaan Right Livelihoodpriset ee sanadlaha ah.